Madaxweyne Farmaajo oo si kulul uga hadlay weerarkii xalay ee Muqdisho (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo si kulul uga hadlay weerarkii xalay ee Muqdisho (DHAGEYSO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa markii ugu horeeysay ka hadlay weerarkii xooganaa ee xalay ka dhacay maqaayadda Pizza House iyo Hoteelka Posh Tears ee magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa marka hore tacsi u diray dadkii lagu laayay weerarkii xalay oo ay dagaalyahanadda Al-shabaab ku qaadeen maqaayadda Pizza House iyo Hoteelka Posh Tears, wuxuuna ku tilmaamay mid naxariis darro ah.
“Waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii xalay ku geeriyooday weerarkii naxariis darrada ahaa ee Al-shabaab ka geysteen goobo ay dadka shacabka ah isugu yimaadeen, waxay dadkaasi ahaayeen dad shuhado ah oo bil Ramadaan ah la dilay, waliba xilli ay farxaddii afurka ku jireen.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa Al-shabaab ku tilmaamay dad farxada u diidan shacabka Soomaaliyeed, isagoona weerarkii xalay ku tilmaamay mid laga murugoodo in bil barakeysan oo Ramadaan ah dad shacab ah la iska laayo.
“Waa arrin laga murugooda in bil barakeysan, waliba tobankii dambe lagu jiro dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan in la laayo, waliba lagu faano ayada oo shaar diimeed la huwan yahay, caddowgaan waa mid noo diidan inaan faraxno, inaan nabadgalyo helno, inaan shucuubta dunidda la jaan-qaadno, in qoysaska Soomaaliyeed ay nabad ku soomaan, nabadna ku afuraan.” Ayuu madaxweyne Farmaajo hadalkiisa raaciyay.
Weerarkii xalay ka dhacay maqaayadda Posh Tears iyo maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku geeriyootay ku dhawaad 20 qof, iyadoona in ka badan 30 kale ay ku dhaawacantay, sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya.